:: Blog Home :: Gautam B. ko Sajha Blog ::
:: RECENT BLOGGERS
:: Last 1 Week Last 1 Month Last3Months Last6Months Last 1 Year Last 10 Years
:: May 2021
:: April 2021
:: March 2021
:: February 2021
:: January 2021
:: December 2020
:: November 2020
:: August 2020
:: July 2020
:: June 2020
:: May 2020
:: April 2020
:: January 2020
:: December 2019
जब लुकीलुकी चियाउँछ रंगीन शरद [Gautam B.'s Blog]
Blog Type:: Poem
Sunday, September 28, 2008 | [fix unicode]
(Also posted in http://www.basantagautam.com )
[ posted by Gautam B. @ 11:35 PM ] | Viewed: 2589 times [ Feedback] (2 Comments)
एउटा सुन्दर यात्रा [Gautam B.'s Blog]
Sunday, September 09, 2007 | [fix unicode]
“ल म हिँडे बूढो! ढोका लगाउन आउनु त छोरी ले’र। हिँड्ने बेलाँ छोरीलाई चुप्प गर्नु परो।“
“पर्दैन, छोरीलाई थाहा नदी’कन जाउ। बेकाराँ रुन्छे एकछिन।“ तर आमा हिँड्न आँटेको थाहा पाएर छोरी ढोकैमा पुगिसकेछे।
“ल छोरी, बाइ-बाइ गर मामुलाई!” म छोरी बोकेर उभिएँ। छोरी हात हल्लाउँदै रुन थाली सधैंजस्तै।
“इसुका सुपा भित्रको एउटा रेष्टुरेण्टमा आरुबाइतो बोउसिउ देखेर फोन नं ल्या’की छु। म अब शनिबार, आइतबार काम गर्छु।“
“ठिकै छ नि, झण्डै डेढ वर्ष भईसक्यो तिमी घरको घरै भएको। गरे हुन्छ।“
चार महिना पहिला हाम्रो यस्तै घर-सल्लाहबाट शुरु भएको थियो उनको दुइदिने काम। छोरी पेटमा आएको केहि महिनाबाटै उनी घरमा बस्न थालेकी, त्यतिखेरसम्म त छोरी पनि एक वर्ष कटिसकेकी थी।
छोरी फुलिएपछि उसलाई लिएर म भित्र पस्छु र छरिएका खेलौनाहरुको माझमा उसलाई छोडेर हिजो बेलुका धोएर मेशीनमै छोडिएका लुगा सुकाउन बरण्डातिर निक्लन्छु।
‘कता गएर लडी कि क्या हो?!’ छोरी अचानक च्याँठ्ठिएर रोएको सुनेर म हतारिएर भित्र पस्छु। अचेल कुर्सी, सोफा, टेबुल जता पनि चढ्न खोज्ने भएकी छे, कतिखेर कता चढेर लड्ने हो डरमात्रै लागिरहन्छ। कोठाको एउटा कुनामा बसेर रुँदै छे छोरी। लडेकी होइन रहेछ, आफू बस्ने सानो कुर्सी घिसार्दै हिँड्दा त्यसैले खुट्टा थिचेजस्तो लाग्छ। कुर्सी उ आफैंले हटाइसकेकी थिइ म पुग्दा। म आफूले देख्ने ठाउँमा ल्याएर राख्छु ऊ, उस्को कुर्सी र ऊस्का मनपर्ने खेलौनाहरुलाई।
बिहान खाजा खाएका भाँडाहरु माझ्न थाल्छु बेला-बेला छोरीतिर पनि आँखा लगाउँदै।
अचानक छोरी रमाएर उसको बालसुलभ शैलीमा खित-खित-खित हाँसेको सुन्छु। कतिखेर-कतिखेर मेरो आँखा छलेर बाथरुमभित्र पसिसकिछे। मैले अघि ढोका लगाउन ध्याननै दिएनछु। बाटाको पानी जगले उबाउँदै आफ्नो टाउकोमा, जीउमा हाल्दै थिई ऊ। लुगा सब भिजाईसकेकी थिई।
“तँलाई बदमाश, के ग-या यस्तो?!” म उसलाई तानेर बाहिर निकाल्छु र भिजेका लुगा सबै फुकाल्दिन्छु। ऊ अब झन खुशी भएर बाथरुमतिर पस्छे।
‘भएन, नुहाइदिनै प-यो।‘ हरेक दिन साँझमा नुहाईदिने गरेको छौं, बिहान त्यति नुहाइदिएको छैन।
नुहाइदिइसकेपछि उसलाई फेरि कोठामा खेल्न छोडेर म अघि माझ्दा-माझ्दै बाँकी रहेका भाँडाहरु माझ्न जान्छु।
‘भएन अब, पकाउने मेसो गर्नु प-यो। पकाइसकेर बस्यो भने ढुक्क।‘ भाँडा माझिसकेर म पकाउने सूरमा लाग्छु।
‘यो बदमाश--- फेरि---!’ उ कोठाको पल्लो छेउको कुर्सीमा चढेर भित्ताको पोष्टर छुने बल गरीरहेकी हुन्छे र लड्ली-लड्लीझैं भैसकेकी हुन्छे। म टिभी खोलेर कार्टून आईरहेको च्यानेल छ कि कतै भनेर खोज्छु, कुनैमा पनि हुँदैन। यत्तिकै एउटा च्यानेल लगाएर उसलाई कुर्सीमा राखेर छोड्छु। ‘एकछिन त अल्मलिन्छे होली यसमा।‘
म अझै खाना बनाउँदै छु (साह्रै सुस्त छु म यो काममा!), छोरी गनगन गर्न थालेकी छे, टिभीले बाँध्न सकेन उसलाई। उ भान्छामै आउँछे र मेरो पछिपछि लाग्छे, मलाई समातेर लुटुपुटु गर्दै। कुनै उपाय बाँकी छैन मसंग अब, यसैगरी काम गर्नु बाहेक।
खाना बनाईसक्दा साढे दश बज्छ। अरु दिन उस्को होइकुएनमा खुवाउने समय एघार बजे हो। आधा घण्टाको लागि कोठा अगाडि निक्लन्छु म छोरी र एउटा ठूलो तर हल्का बल लिएर। भर्खर-भर्खर खुट्टाले हान्न जानेकी छे उसले, तर अझै पनि बढी हातैले बोकेर फ्याँक्न रुचाउँछे। छोरीसंग बल खेलेर, अगाडि-पछाडि कुद्दै ‘भेट्टाएँ--!’ खेलेर र कहिले उसलाई चरी देखाएर आधा घण्टा कट्छ।
अहिले रमाइलो ‘मुड’मा छे, खाना सजिलै खान्छे होला भन्ने मेरो सोचाइ गलत निस्कन्छ। गनगन गर्दै ‘खान्न, खान्न’ भनेझैं टाउको हल्लाउँदै कम्प्युटरतिर देखाउँछे। खाना खाँदा ‘यू ट्यूब’मा नेपाली लोकगीत हेर्ने बानी लागेको छ उस्को (आफूलाई सजिलो गराउन हामीलेनै लगायौं भनौं न अब साँचो कुरा गर्नुपर्दा!)। म एउटा बीस मिनेटजति लामो दोहरी गीत छान्छु, तर ऊ रुन थाल्छे, अचेल यो धेरै सुन्दा-सुन्दा मन पर्न छोडेजस्तो छ। धेरै नयाँ गीत खोज्न मलाई बाध्य पार्छे आज ऊ।
उसलाई खुवाएर म आफैंले पनि खाईसक्दा बाह्र कटिसक्छ। ऊ मेरो हात समातेर मेरो ध्यान तान्छे र ढोकातिर देखाएर ‘हुँ---हुँ’ गर्छे। बाहिर जाउँ भनेकी हो उसले।
“काँ बाहिर जानु नि अहिले, गर्मी छ बाहिर---!” तर ऊ मान्दिन, खुट्टा बजार्दै रुन थाल्छे। कसरी यो खुट्टा बजार्ने बानी आयो, थाहा छैन। बच्चाहरु बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रुपमा आफैं आउने हो कि?
म उसलाई लिएर बाहिर निक्लन्छु। तर उसको सूर यहाँभन्दा परको रहेछ, मलाई भ-याङ्गसम्मै लान्छे तानेर र ‘तल जाऊँ’ भनेर माग गर्छे।
“तल जानु हुन्न बाबा, गर्मी छ एकदम। हिँड भित्र जाऊँ।“ तर ऊ डेग चल्दिन त्यहाँबाट।
“जानेभए आफैं जाउ, म भित्र गएँ, बाइ-बाइ!” उसलाई धम्की दिन्छु म र कोठातिर फर्किन आँटेजस्तो गर्छु।
तर मेरो मतलब गर्दिन ऊ, तल ओर्लिन सिँढीमा एउटा खुट्टो राख्छे र मतिर हेर्छे, ‘मलाई समात्न आउने भए आइज, नत्र म आफैं ओर्लिन खोजेर लडिदिन्छु, अनि थाहा पाउलास्!‘ भनेजस्तो गरेर। मेरो धम्कीलाई निस्तेज पारिदिन्छ उसको धम्कीले!
“बदमाश! कति दु:ख दिन जान्या होला---!” उसको हात समातेर ओर्लिन थाल्छु म।
तल पुगेपछि ऊ मेरो हात फाल्दिन्छे र सडकतिर दौडिन खोज्छे। उसको गति नियन्त्रण गर्न हम्मे-हम्मे पर्छ मलाई। एकदम रिसाउँछे पनि ऊ आफूले चाहेको जसरी स्वच्छन्द दौडिन नपाएकोमा।
ऊ घरनजिकैको एउटा उद्यानतिरको बाटो समाउँछे। ठाऊँ र दिशा अलिअलि सम्झिन सक्ने भईछे अब। एकछिन पछि-पछि लाग्छु म, एकमन लाग्छ ‘उद्यानसम्म लैजाउँ छोरीलाई, पिङ्ग खेल्छे, कुद्छे, रमाउँछे।‘ तर प्रचण्ड गर्मी छ, ‘यो गर्मीमा धेरै बाहिर राख्यो भने यो बिरामी हुन्छे।‘ म उसलाई बोक्छु र घरतिर फर्कन्छु। कोठामा पसुञ्जेलसम्म पनि ऊ रुँदै, छटपटाउँदै र रिसले मेरो मुख कोतर्दै, मेरो कपाल भुत्लाउँदै हुन्छे।
म कोठामा छरिएका खेलौनाहरु र लुगाहरु मिलाउन थाल्छु। रुवाइ रोकिईसकेको छ उस्को र ऊ मेरो लुगा समातेर मेरो पछि-पछि लागेकी छे। खुब मनपर्छ उसलाई यसो गर्न। हिँडिरहँदा आफ्नो ‘जिबरीश’ बोलीमा के के भनीरहेकी पनि हुन्छे।
एकछिनपछि ऊ आँखा मिच्दै रुन थाल्छे। मलाई थाहा छ, यतिखेरको रुवाईको कारण। ऊस्को सुत्ने समय भयो। पहिला अलि-अलि पढिएको मात्रै थियो, अहिले अनुभवनै भयो, बिरामी भएको बेला बाहेक बच्चाहरु एकदम नियमित समयतालिका अनुसार सुत्ने-उठ्ने गर्छन्। म हतार-हतार उस्को विछ्यौना मिलाइदिन्छु र उसको मुखमा ‘‘स्याबुरी’ राखिदिन्छु। एकछिनमै निदाउँछे उ।
ऊ ननिदाउञ्जेल उसलाई थपथपाउँदै विछ्यौनामा पल्टिँदा म पनि उँघ्न थालिसकेको हुन्छु। आज बिहान चार बजेतिर छोरी एकछिन गनगन गरेकी थिई। ऊ त एकछिन पछि फेरि निदाईहाली, हामी भने फेरि निदाउन सकेनौं। त्यसैले एकदम निद्रा लागेको छ मलाई। तर सुत्ने समय छैन मसंग! छोरी सुत्ने दुई-साढे दुई घण्टाभित्र धेरै काम गर्नु छ मैले। ‘बाथरुम सफा नगरेको धेरै दिन भईसकेको छ, ‘चौतारी’ पढ्नु छ, ‘कान्तिपुर’ पढ्नु छ, ‘ब्लग’मा केहि नलेखेको हप्ता कट्न आँटिसक्यो (बेकारमा थपिएछ यो बोझ जिन्दगीलाई!), कोहि साथी ‘लाइन’मा आए ‘च्याट’ गर्नु छ---‘। एक कप चिया बोकेर म कम्प्युटरको अघिल्तिर टाँसिन्छु।
अहिले बल्ल थाहा पाउँछु म आफू कति थाकेको रहेछु भनेर। पहिला-पहिला पूरै समय उनले छोरी हेर्दा ‘एकदिनभरि छोरी एक्लैले स्याहार त, कति गाह्रो हुन्छ!’ भनेर उनले भन्दा त्यसै हाँसेर उडाइन्थ्यो, अहिले बल्ल बुझ्दैछु।
पत्रिकाका खबरमा खासै मन जाँदैन, टाउके खबर (हेडलाइन) हरु मात्रै पढ्छु। अनि ‘चौतारी’ पस्छु। कोहि पनि नहुने समय भएछ। सबैभन्दा पछिल्लो पोष्ट पनि एक घण्टा पुरानो भईसकेछ। एक राऊण्ड चौतारीको हावा खाँदै गाम्लेका कुरा पढेर एक्लै हाँसिसकेपछि म फेरि कुर्सीमै ऊँघ्न थाल्छु।
दुईटा साथी त देखिएका छन् लाइनमा तर ‘भाँडमा जाओस् आज च्याट-स्याट पनि!‘
छोरी उठेपछि उसलाई लिएर म उद्यानतिर लाग्छु। गर्मी छ अझै, तर ‘यत्तिको गर्मीले त खासै फरक नपर्ला।‘ केहि अरु बच्चाहरु खेल्दै थिए। छोरी सोझै पिङ्गतिर जान्छे। म उसलाई पिङ्गमा राखेर मच्चाइदिन्छु। ऊ खुशीमा के के ‘जिबरीश’ बोल्न थाल्छे फेरि। म अगाडि गएर उस्लाई जिस्काउँछु र बेला-बेला पिङ्ग मच्चाइदिइरहन्छु।
“छुटेको हो तिमी?” उनको फोन रहेछ।
“हो। तिमीहरुका बाउ-छोरी छोरी काँ’ नि’ अहिले?”
“छोरी के गर्न लागेकी छे नि’?”
“पिङ्ग खेली अघाउञ्जेल। अहिले त्यो काठको घोडाजस्तो के जातीमा बसेर हल्लिराखेकी छे।“
“म त्यतै आउँ?”
“भयो अब, धेरै बेर भईसक्यो। बरु हामी घरतिरै आउँछौं।“
“छोरी, हेर त को आयो?” घरनिर उनी देखिन्छिन्।
“माम्मा---!” छोरीको अनुहार उज्यालो हुन्छ।
उनी अलिक परै उभिएर आफ्नो अँगालो फैलाउँछिन्। छोरी दोडिँदै उनीतिर जान्छे। उनी छोरीलाई उचालेर एकचोटि माथिसम्म पु-याउँछिन्, अनि काखमा लिन्छिन् र चुप्प गर्छिन्।
म मन्त्रमुग्धझैं हेरिरहन्छु। जिन्दगी मलाई कुनै अनवरत सुन्दर यात्राजस्तै लाग्छ।
इसुका: काल्पनिक ठाऊँको नाम
सुपा: ‘सुपरमार्केट’ को जापानी बोली
‘आरुबाइतो बोउसिउ’: ‘पार्ट टाइम काम गर्नेहरुको आवश्यकता’
स्याबुरी: (विशेष गरी) सुत्ने बेलामा बच्चालाई चुस्न दिइने चिज, अंग्रेजीमा Pacifier
अगष्ट ३०, २००७ (दिउँसो ५ बजे)
[ posted by Gautam B. @ 02:24 AM ] | Viewed: 2005 times [ Feedback] (2 Comments)
घाम ओर्लिएको छ सडकमा [Gautam B.'s Blog]
Saturday, September 08, 2007 | [fix unicode]
हामी खाजा खान थाल्छौं। हामीलाई लागेको मात्र त्यस्तो हो कि कुन्नि, विदाको दिन छोरी चाँडै उठ्छे, अरु दिन ढिलोसम्म सुतिदिन्छे।
“होइकुएन मा लानुपर्ने सामान मिलाईदेउ। अरु म गरौंला।“
“छोड्---! के ग-या यो---?” साँच्चै झर्किँदै उसलाई पन्छाउँछु म। म झर्केको देखेर ऊ रुन थाल्छे। यो पनि यत्तिकै छोडेर हिँड्न आँटेको थिएँ, तर देख्छु बढी भएर फालिएको खाना पनि छरिएको छ भान्छा भरि। यो गर्मीमा यत्तिकै छोड्नु हुन्न भनेर सफा गर्न थाल्छु। फोहर सबै उठाउँछु, भुईँमा लागेको दाग भने नपुछी छोड्दिन्छु।
“खावाइ ने!” ट्याक्सी ड्राइभर छोरीलाई हेरेर बोल्छ। छोरीलाई काम पुग्छ, ऊ फेरि गनगन गर्दै पिरल्ने पाराले रुन थाल्छे। सधैं त हाँस्थी कसैले बोलाउँदा, ‘आज देवी चढ्या छ यसलाई!’ म फुलाउने कोशिश गर्छु।
उसलाई फुलाउँदै गर्दा मेरो मनमा धेरै कुरा चल्न थाल्छन्। धेरै दिन भईसक्यो यसरी ढिला-ढिला जान थालेको। अफिसमा कसैले ठाडै त केहि पनि भनेको छैन अहिलेसम्म, तर खासखुस गर्न थालिसके। हाकिमले पनि थाहा पाईसक्यो होला यसरी म लगातार जसो ढिला आउन थालेको। कुनदिन ‘निक्ली’ बनेर कागत दिने हो! आफैंलाई पनि आत्मग्लानि हुन थालेको छ यसरी सबैको नजरमा कामचोर देखिन परेकोमा, एक किसिमले नेपालकै छवि बिगार्ने बनिएकोमा। ‘छोरीलाई संगै राखेर गाह्रो होला जस्तो छ, नेपाल पठाउनै प-यो, नसकिनै भइयो!’ दिक्क मान्दै सडकतिर हेर्छु म। अघिनै उदाएको भएपनि घाम अझै सडकसम्म आईसकेको छैन, अग्ला घरहरुले छेकिएको छ अझै।
“देतेत, देतेत----“ उसको रुवाइ अचानक बन्द हुन्छ र ऊ ताली बजाएर गाउन थाल्छे। यो ‘देतेत, देतेत----‘ केहि पहिले एकदिन सुत्ने बेलाँमा मैले सुनाएको लोरीबाट टिपेकी हो उसले। वास्तवमा ‘ताराबाजी लै लै---‘ बाहेक मैले जानेको अर्को लोरी त्यत्ति एउटा मात्रै हो (उसकी आमाले दशौं लोरी जानेकि छिन्! )। त्यो पनि बिर्सेको थिएँ, सम्झेको धेरै भएको छैन।
--च्यान: बच्चीहरुलाई माया गरेर बोलाउँदा उनीहरुको नामको पछाडि ‘च्यान’ जोडेर बोलाईन्छ। नेपालीको ‘नानी’संग नजिक छ।
र जापानी त हैन तर त्यो ‘घण्टे’ भन्ने शब्दको बारेमा। घण्टाको हिसाबले दाम पाईने ‘पार्ट टायम’ कामलाई मैले गोताएँ पाराले न्वारान गर्देको!
अगष्ट २४, २००७ (रात्रि १०:५०)
[ posted by Gautam B. @ 12:34 AM ] | Viewed: 2084 times [ Feedback] (1 Comment)
मानबहादुर कतै पनि परेन!! [Gautam B.'s Blog]
Friday, August 10, 2007 | [fix unicode]
सडक कार्यालयको जिल्ला प्रमुख भोजप्रसादको इज्जतदार,शान्त र सुरक्षित जीवनमा अचानक ठूलो आँधी आएजस्तो भयो। सर्सीहा जिल्लाको अलिक भित्रको देहातमा सडक पिच गर्ने बजेटसंग जोडिएर आएको आँधी थियो यो। बाक्लो बस्ती भएको र तिब्र गतिमा नयाँ बजारको रुपमा विकास भईरहेको हरिगञ्ज नाम गरेको यो क्षेत्र पहिलेदेखिनै जनश्रमदानले बनेको एउटा कच्चीनै सही, फराकिलो बाटोले सदरमुकामसंग जोडिएको थियो, । यो कच्ची बाटोमा पूरै ग्राभेल गर्ने र प्रमुख भागहरुमा पीच गर्ने भनेर सरकारले पैसा दिएको थियो, गत वर्षको बजेटमाफर्त। यो भेगको लागि सरकारले पैसा छुट्याएको इतिहासमै यो शायद पहिलो पटक थियो।
अगष्ट १०, २००७
[ posted by Gautam B. @ 08:58 AM ] | Viewed: 2025 times [ Feedback] (5 Comments)
जापान बसाईका केहि कुराहरु [Gautam B.'s Blog]
Blog Type:: Personal Thoughts
Friday, July 20, 2007 | [fix unicode]
जापान आऊँदाका शुरुवाती दिनहरुमा एकदमै उत्साहित एकजना साथी पछि एकताका निकै दिक्क देखिन्थे र जापानीहरुलाई बेला-बेला हल्का सरापीरहन्थे। उनको भनाइ हुन्थ्यो, "यी साला जापानीहरु विदेशी मान्छेको 'खुबिलिटी' हेरेर हैन, खाली कल्ले जापानी भाषा राम्रो बोल्छ मात्रै हेरेर मूल्याकंन गर्छन्। (यो 'खुबिलिटी' भन्ने शब्द नेपालीको 'खुबी' र अंग्रेजीको 'ability' को अन्तरजातीय सन्तान हो भन्ने कुरो मैले नदोहो-याए पनि हुन्थ्यो होला शायद!) जापानी बोल्न जान्ने विदेशी जस्तो काइते भएपनि 'सुगो-ई! सुगो-ई!' (great! wonderful!)भन्छन्, जापानी नजान्ने जति 'ब्रेनी' भएपनि 'बाल' मतलब गर्दैनन्--!" साथीलाई के कुराले गर्दा त्यसरी चित्त दुखेको हो त्यतिखेर थाहा छैन, अहिले त ठिकै भएको देखिन्छ।
साथीको कुरामा धेरै सत्यता भने छ। जापानमा विदेशीको औकात जाँच्ने सबभन्दा ठूलो कसी भनेकै जापानी भाषामाथिको दक्षता हो। जापानी भाषा अलिक जान्ने सोझै असाध्यै विलक्षण प्रतिभाशालीमा गनिन्छ! त्यसैले यत्रतत्र काम, छात्रवृत्ति आदि पाउने ठाउँमा उसको पकड राम्रैसंग जम्छ पनि। दैनिक ब्यबहार र सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी बिल्कुलै प्रयोग नहुने ठाऊँमा यो अलिकति त स्वाभाविकै हो, तर मान्छेका बाँकी योग्यताहरुका पनि केहि न केहि मूल्य त हुनैपर्ने हो!
बढी समस्याचाहिँ अस्पताल जाँदा पर्छ। केहि समय पहिला घुँडा दुखेर पुग्या थिएँ एउटा डाक्टरकोमा।
"दुख्दा कसरी दुख्छ?" डाक्टरले सोधे।
फेरि केहि दिन पहिला छोरीलाई रुघा-खोकीले सताएर अर्को डाक्टरकहाँ जानुप-यो।
"केहि औषधि खुवाएको छ कि छैन, रुघा-खोकी लागेबाट?"
- वसन्त (- http://gautambasanta.blogspot.com)
[ posted by Gautam B. @ 04:05 AM ] | Viewed: 2301 times [ Feedback] (6 Comments)
घुम्दै-फिर्दै फेरि नेपाली लोकगीत [Gautam B.'s Blog]
Blog Type:: Essay
Wednesday, June 20, 2007 | [fix unicode]
घुम्दै-फिर्दै, फेरि नेपाली लोकगीत!
२०३०को दशकमा हुर्किँदा सुन्न पाउने भनेको रेडियो नेपालले बजाउने नेपाली लोकगीत-गीतहरु र हिन्दी फिल्मी गीतहरु मात्रै थिए। हाम्रो घरमा रेडियो थिएन। काकाको घरमा थियो एउटा सानो नेशनल-पानसोनिक रेडियो।त्यो रेडियोमाथि हजूरआमाको पूरा नियन्त्रण थियो। के सुन्ने, के नसुन्ने भन्ने कुराको निर्णय अरुले हतपती गर्न पाउने चलन थिएन। हजूरआमालाई शाही नेपाली सेनाले चलाउने कार्यक्रममा भीमबहादुर थापाका रुपकहरु असाध्यै मन पर्थ्यो, बेलुका आउने कृषि कार्यक्रमकी बूढीआमैको गन्थन र परिवार नियोजन कार्यक्रमका रमाईला सम्वादहरु पनि खुब सुन्नुहुन्थ्यो वहाँ। त्यस्तै हरेक शनिबार दिउँसो एक कि साढे एक बजे आउने नाटक पनि सुनिन्थ्यो, घर-छिमेकका लगभग सबैले। ठूलो जमात भेला भएर चिया पिउँदै, गफ गर्दै नाटक सुन्ने ती दृश्यहरु मेरो मानसपटलमा नमेटिने भएर रहेका केहि दृश्यहरुमध्ये पर्छन्। काकाका छोराछोरीको अनूरोधमा केहि नियम बाहिरका कार्यक्रमहरु पनि बज्थे होलान्, तर हाम्रो अनूरोधको खासै सुनुवाई हुँदैन थियो। बढीमा बाल-कार्यक्रम सम्म सुन्ने अनुमति हुन्थ्यो यदाकदा। बाल-कार्यक्रम, त्यसभित्रको पनि ‘हातेमालो’ भन्ने कार्यक्रम असाध्यै मन पर्थ्यो मलाई। काकाको घरको रेडियोबाट सुन्ने अवसर नपाएको बेला ठूलो बाको घरमा पुग्थें बाल-कार्यक्रम सुन्न। त्यहाँ मेरै अनूरोधको सुनुवाई हुने भएर भने जाने होइन। त्यो घरको कान्छो छोरो मसंग एउटै उमेरको (म भन्दा एक महिनामात्रै कान्छो) थियो र हामी एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्थ्यौं। उसकै कारणले मैले पनि सुन्न पाउँथे बाल-कार्यक्रम।
चीनमा बस्दा अँग्रेजी गीतहरु सुन्न थालियो। शुरवात जोन डेन्भर र बिटल्सबाट भएको याद छ मलाई। एक वर्ष भाषा पढेर इञ्जिनियरिङ्ग पढ्ने विश्वविद्यालय गएपछि भने एकदम धेरै सुन्न थालें। कारणचाहिँ संगै पढ्ने, सानेपा घर भएको एकजना साथी थियो। उसंग अंग्रेजी गीतहरुको धेरै ठूलो संकलन थियो, धेरै त नेपालबाटै लिएर गएको। उ ‘गन्स एन रोजेज’ र ‘जिम मोरिसन’ भनेपछि मरिहत्ते गर्थ्यो। मैले ‘यू टू’, ‘पिंक फ्लोयड’, ‘रोलिङ स्टोनस्’, ‘आरइएम’, ‘क्वीन’आदि थाहा पाएको उसैबाट हो। त्यहाँ हाम्रै उमेरको एउटा अमेरिकी (मिनेसोटा राज्यको) केटो अंग्रेजी पढाएर बसेको थियो छ महिना जति। हुनत, उ हामी भन्दा अलि फरक थियो, उल्टो संस्कृत, गीता, ध्यान आदिमा बढी रुचि भएको, तर उसबाट पनि धेरै थाहा पाइयो अंग्रेजी गीतहरुको बारेमा। उ विशेष गरी त्यतिखेरका मूलधारभन्दा अलि फरक खाल्का अँग्रेजी गीतहरु बढी रुचाउँथ्यो। ती चार वर्षको दौरानमा मैले सुनेका मध्ये सबैभन्दा मन पर्ने समूहहरु भन्नु पर्दा ‘क्वीन’ र ‘डायर स्ट्रेट्स’ भन्छु होला शायद। अंग्रेजी गीतहरु बढी सुन्ने यो क्रम २०५३ तिरबाटै बिस्तारै कम हुँदै गयो।
चिनियाँ गीतहरु पनि सुनिन्थ्यो धेरै। शास्त्रीय चिनियाँ संगीत मन परेपनि बढी उदासी भरिएको लाग्ने हुँदा अलि कम सुन्थें। चीन भर्खरै मात्र खुल्ला समाजको बाटोमा हिँडेको थियो र पप गीतहरु पनि त्यसै अनुसार अगाडि आउँदै थिए। हङकङ र ताइवानका पप गीतहरु पनि बढी सुनियो। मूलभूमि चीनमा भने रक गीतहरुको बाढीनै आएको थियो त्यो ताका। अर्थतन्त्र विस्तारै पूँजीबादतिर गएपनि कठोर साम्यवादी राजनीतिक बन्देज भने छँदैथियो। यस्तो अवश्थामा रक गीतहरुले अति अप्रत्यक्ष तरिकाले राजनीतिक सन्देश बोकेका जस्ता लाग्थे। थुप्रै समूहहरु मध्ये ‘थाङ डाइनाष्टी’ र छुइ चियान (ब्यक्तिको नाम) बढी मन परेका थिए। हङकङको एउटा ‘बियोण्ड’ भन्ने समूह पनि खुब मन पर्थ्यो, हुनत त्यो समूहका सबैजसो गीतहरु क्यान्टोनीजमा हुन्थे। नेपाल फर्किँदा यी समूहहरुका केहि क्यासेटहरु पनि ल्याएको थिएँ।
छोरी सात महिनाजतिकी भएपछि होला, उ केहि कुराको आड पाए बिस्तारै उठ्न थालेकी थिई। एउटा एक फूट जति उचाइको होचो टेबुल छ घरमा। उ त्यसको आडमा उठ्न मन पराउँथी धेरै जसो। अनि हामीले के देख्यौं भने लोकगीतहरु बजेको बेला छोरी एकदम खुशी हुन्छे। एक हातले टेबुलको आड लिएर अर्को हात घुमाएर नाचेझैं पनि गर्छे। हामीले सिकाएको याद छैन, शायद कतिपय कुरा बच्चाको स्वभावअनुसार प्राकृतिक रुपमै पनि आउँछन् होला। हामी पनि खुब रमाउँथ्यौ उस्को ‘नाच’ हेरेर।
[ posted by Gautam B. @ 08:45 AM ] | Viewed: 3112 times [ Feedback] (2 Comments)
कुरुप वर्तमान [Gautam B.'s Blog]
Friday, May 18, 2007 | [fix unicode]
झण्डै ७ वर्षभन्दा पहिला लेखेका यी हरफहरुले भूतकाल बन्ने अवसर अझै पाएका छैनन्। जहिले हे-यो, नेपालको वर्तमान झन-झन कुरुपनै देखिन्छ।
("कविताको देश" भन्ने धागोमा टाँसिसकेको हो है!)
जताततै हनुमानहरु दौडिरहेछन्
पूच्छरमा आगोको लप्का बोकेर चाकडीको
विनाकारण जलाउँदै सुनका लंकाहरु,
स्वचालित वेहोश हातमा बजिरहेछ डमरु
मस्त धङ्धङेमा रमाएर हेर्दैछन प्रभुहरु
र अनियन्त्रित नाचिरहेछन् बाँदर टुकडीहरु ;
रंगीचंगी नाराका खोल ओढेर
अवसरको खेती गरिरहेछन्
र एक बाली भित्र्याई डकारेर
नयाँ फसलको तयारीमा
रंग फेरिरहरछन् छेपाराहरु ।
रगतको आहालमा डुबेका छन् हिमालहरु
डढेको जंगलबाट षडयन्त्रको गन्ध आईरहेछ
र ठाऊँ ठाऊँमा उम्रन थालेका छन्
तावेदारीका नयाँ झारहरु ;
भविष्यको पदचाप सुनिदैन
[ posted by Gautam B. @ 10:51 AM ] | Viewed: 2823 times [ Feedback] (1 Comment)
'यहोवा'ले हैरान पारे!! [Gautam B.'s Blog]
Tuesday, April 24, 2007 | [fix unicode]
‘यहोवा’ले हैरान पारे!!!
केहि समय पहिला एउटा नाइजेरियाली साथीको बिहेमा गईएको थियो। उ ‘यहोवाको
साक्षी’ हो। मैले ‘यहोवा---‘ मात्रै नभएर कुनै पनि कृश्चियन सम्प्रदायको वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको थिईन, यसभन्दा पहिला। ‘मैले एकदम साधारण तरिकाले विहे गरेको हुँ।‘ भन्थ्यो साथीले। साधारणनै थियो, जानुअगाडि मैले सोचेको भन्दा धेरै साधारण। जापानीहरुको संख्या त धेरै हुनेनै भयो, अफ्रिकी मूलका मान्छेहरु पनि धेरै थिए। ‘यहोवा--‘ का प्रकाशनहरु हेर्दा ‘यहोवा---‘ अफ्रिकामा निकै दह्रोसंग जरो गाड्दै हो कि जस्तो पनि लाग्छ।
यो साथी म भन्दा केहि महिना पहिला आएको रहेछ विश्वविद्यालयमा। चिनजानको एक-दुई दिनपछिनै ‘तैंले बाइबल पढेको छस्?’ भनेर सोधेको थियो। ‘पढ्या छु नि, किन छैन!’ भनेर जवाफ फर्काएको थिएँ मैले (नेपालीमा अनुदित बाइबल पढ्न थालेको थिएँ एकताका, खासै रुचि जागेन र छोडिदिएको थिएँ।)
“पढेर बुझिस् त?”
“चाहिने जति बुझें।“
“नबुझेको भए, म तँलाई बुझाउन तयार छु।“ भनेर भनेको थियो उसले। मैले ‘हुन्छ, म तँलाई भनौंला नबुझेको बेला।‘ भनेर फुत्केको थिएं। पछि एक-डेढ महिनासम्म पनि बेला-बेलामा कुरो झिक्दै थियो, तर त्यत्ति रुचि नदेखाएपछि कुरो गर्न छोडेको थियो। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध सामान्य मित्रवत रहँदै आएको छ।
तर मेरो ल्याबको एउटा थाइ साथीलाई भने अतिनै गर्न थालेछ। थाइ साथी फेरि अति कट्टर बौध्दमार्गी! ‘रुचि छैन।‘ भनेर भन्दा पनि जतिखेर पनि बाइबल पढाउन खोज्ने, दिनदिनै थाइ भाषाका ‘यहोवा---‘ सामाग्रीहरु लगेर उ नभएको बेला उसको कोठाको ढोकाबाट छिराइदिने आदि गर्न थालेपछि थाइ साथीलाई साह्रै रिस उठेछ र एकदिन भेटिएको बेला “ If I can have thousand births, I will be Buddhist in every life! ---“ त्यस्तै केहि भन्दै धम्क्याएछ। त्यसपछि मात्रै नाइजेरीयाली साथीले उसलाई बाइबल पढाउने कोशिश गर्न छोडेछ।
उता घरमा पनि जापानी ‘यहोवा---‘ हरु आएर बाइबलको कुरा गर्न थालिहाल्ने, ढोका खोलिसक्नेबित्तिकै। पहिला त केहि थिएन बिदाको दिनमात्रै घर बसिन्थ्यो। तर पछि छोरी जन्मेपछि उनी केहि महिना घरै बस्ने क्रममा ‘यहोवा---‘ले हैरान पार्न थाले। समय पनि छैन, रुचि पनि छैन भनेर जति भनेपनि टसको-मस नहुने! आज त ढोकै खोल्दिन भन्यो, आधा घण्टासम्म ढक्ढक्याईरहन्छन्। घरमा सानो बच्चा छ भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि मतलब गर्दैनन्। भएन भनेर ढोका खोलेर हे-यो, भित्रै पसिसक्छन् र नेपाली भाषाका ‘यहोवा---‘ सामाग्रीहरु र बाइबल खोलिहाल्छन्। झनक्क रिस उठ्छ, तर गर्ने के?!
यीनीहरुको बारेमा राम्रो धारणा नबन्नुको अर्को कारण यीनीहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई ‘तालेबान’ ढंगले गर्ने नियन्त्रण पनि हो। यो कुरोचैं एउटा नेपाली ‘यहोवा---‘ जोडीले आफ्ना छोराछोरीलाई गरेको ब्यबहार देखेरै जानियो। हुनत त्यो जोडी ‘नया जोगी’ हुनाले ‘बढी खरानी धसेको’ पनि हुनसक्छ, तर ‘यहोवा---‘ हरुले उत्सव मनाउनु हुन्न भनेर बच्चाहरुलाई समेत कतै रमाईलोमा, कार्यक्रमहरुमा जान नदिएको र कखरा फोर्न थालेदेखि बाइबलमात्रै पियाउन थालेको देखियो। आफूलाई त पूरै जिन्दगीनै उत्सव जस्तो लाग्छ! फेरि वयस्क भएपछि कसैले अँगाल्ने आस्थाको कुरो बेग्लै हो, तर बच्चाहरुलाई त सकेसम्म विवधतापूर्ण वातावरण दिनुपर्छ, सकेसम्म सबै आस्थाहरुसंग परिचित गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ।
‘यहोवा---‘ हरु रक्तदानका विरोधी हुँदा रहेछन्। मर्न आँटिसकेको मान्छे अरु कसैको रगत दिएर बाँच्छ भने पनि दिनुहुँदैन रे, रक्तदान गलत हो रे! बाइबलमा के लेखेको छ कुन्नि, तर मेरो काँचो दिमागले भने रक्तदान जस्तो पुण्य कुरो अरु कमै ठम्याएको छ। यो रक्तदान विरोधी नीतिमा कता-कता रंगभेद-जातिभेद पनि पो लुकेको छ कि?!
एक हप्ता पहिला आइतबारपनि आएर ढोका हान्न थाले, दुईटी ‘यहोवाका साक्षी'हरुले। बूढा-बूढीले सल्लाह ग-यौं, ‘आजचैं ढोकै नखोल्ने!’ भनेर र मान्छे नभएझैं गरेर चूप लागेर बस्यौं। तर छोरी बोल्न थाली, सुनेर ‘भित्र मान्छे छन्।‘ भनेर कुरा गर्दै झन जोडले ढोका बजाउन थाले। बाध्य भएर ढोका खोलियो। यसपटकचैं तगारै बनेर उभिएँ ढोकामा। एकछिनसम्म ‘यहोवाको राज्य’को बखान हाने र ‘प्रहरी धरहरा’ (Watchtower भन्ने उनीहरुको प्रकाशनको नेपाली संस्करण) को फरक-फरक अंकका तीन प्रति दिएर हिँडे।
हिजो फेरि कालो सूट लाएका दुइ वयस्क पुरुष र दुइ सात-आठ वर्षे बालकको समूह आएको थियो। एकछिन ढोका हानेर हिँडे तिनीहरुचैं। जापानी ‘यहोवा---‘हरु विदेशीको नाम लेखिएको ढोकाहरुमा विशेष रुचि राख्छन्, कारणचाहिँ रामजाने!
केहि समयपहिला ‘यहोवाका साक्षी‘हरुसंग सम्बन्धित एउटा रमाईलो समाचार पढेको थिएँ। यहाँमात्रै किन, अन्त पनि, पहिला पनि यस्तै रहेछन् यिनीहरु। आज गुगलमा खोजेर त्यो समाचार फेरि पनि पढें। तपाईँ पनि पढ्नुस्, मन लाग्छ भने।
(अप्रिल २३, २००७)
[ posted by Gautam B. @ 08:45 AM ] | Viewed: 3559 times [ Feedback]
Japan-Some Random Thoughts-I [Gautam B.'s Blog]
Thursday, April 19, 2007 | [fix unicode]
“जापान-मनका केहि तरंगहरु”
दिक्षान्त समारोहको दिन, ब्यक्तिगत हिसाबमा, सबैजस्तै स्वाभाविक रुपमा म पनि खुशी थिएँ, त्यत्तिकै स्वाभविक खुशी मेरो परिवारमै पनि हुनेनै भयो।
प्रमाण-पत्रहरु वितरण भईसकेपछि विश्वविद्यालय-प्रमुखले सबैलाई बधाई दिँदै ८-१० मिनेट लामो मन्तब्य राखे र सबैको सफल भविष्यको कामना गरे। त्यसपछि सबै विद्यार्थिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्तब्य राख्न भनेर एउटा जापानी केटो मञ्चमा उक्लियो। केटाले कोटको खल्तीबाट, राम्ररी पट्याएर राखिएको कागज निकालेर पढ्न थाल्यो। जापानी भाषाको मेरो सीमित ज्ञानका कारण बढीमा त्यस्तै १० मिनेट जतिको केटाको मन्तब्यको कति कुरा बुझियो, कति कुरा बुझिईएन। तर मैले राम्रैसंग बुझेका दुईटा कुराले भने जापानप्रतिको मेरो धारणामा पहिरै ल्याईदिए। तीमध्ये पनि पछिल्लो कुरोले विशेष प्रभाव पा-यो। ती दुबै कुरा मेरो ब्यक्तिगत जीवनसंग सम्बन्धित थिएनन्, यहाँसम्म कि जापानमा बस्ने विदेशीहरुसंग समेत सम्बन्धित थिएनन् मेरो जीवनमा कुनै प्रभाव पार्नको लागि।
पहिलो कुरो, केटोले जापानको २००६ सालका प्रमुख उपलब्धिहरुको शिर्ष सूचिमा मात्सुजाका दाईसुके बोस्टोन रेड सक्ससंग अनुबन्धित हुन सक्नुलाई राखेको थियो। ठीक छ, बेसबल भनेपछि मरिहत्ते गर्ने जापानीहरुका लागि यो कुरा ठूलो होला, तर के जापान एउटा देशको हिसाबले हेर्दा यो राष्ट्रिय गौरबकै कुरा हो त? पेशेवर खेलाडीहरु आज यता, भोलि उता हुनु सामान्य हो। बिस्तारै फूटबलले बेसबलप्रतिको त्यो ‘क्रेज’ पनि खोसेर लाँदैछ। भोलि कुनै जापानी फूटबल खेलाडी इटाली अथवा इंग्ल्याण्डको कुनै क्लबमा अनुबन्धित भयो भने यसैगरी उसको नाम आउला त? जापान बस्ने सबै बिदेशीले सजिलै भन्नेछन्, “आउँदैन!” किनभने दाईसुकेको नाम यसरी आउनुमा उ अमेरिकाको क्लबमा पुग्नु प्रमुख कारण हो। जापानीहरु अमेरिकासंगको प्रसंगमा अत्यन्त हीनताबोधले ग्रस्त छन्, उनीहरु दोश्रो विश्वयुध्दमा आफूले हार्नु परेको कारणको रुपमा भित्र-भित्र अमेरिकालाई घृणा गर्छन् तर जापान अझै सामरिक रुपले अमेरिकाभन्दा कमजोर भएकोले सतहमा अमेरिकाप्रति ठूलो चाकरीभाव दर्शाउँछन्। जापानीहरुले अरु विदेशीहरु र अमेरिकीहरुलाई गर्ने ब्यबहारको फरक हे-यो भने हाँसो उठ्छ। ठीक छ, सबै देशमा यस्तै छ भन्ने मानौं एकछिन, अमेरिकाप्रति यस्तो नगर्ने कुन देश अथवा कुन जनता होला? एक्लो विश्वशक्ति, सामरिक सर्वोच्चता, सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, प्राविधिक-वैज्ञानिक उत्कृष्टता-- ,के छैन अमेरिकासंग?! तर जापानको हकमा भने अलि अचम्मै लाग्दो गरी पसेको छ यो हीनता-ग्रन्थि र ब्यक्तिगत तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म उस्तै छ। चिनिया, कोरीयाली, इण्डोनेशियन अथवा मलेशियाली, कसैमा पनि छैन त्यति त। अझै पनि मानिदिऊँ कि ‘बेसबल क्रेजी’ मानसिकताको परिचय हो यो, तर के यसबाहेक जापानसंग केहि छैनन् त गर्व गर्न लायक कुराहरु?
दोश्रो कुरो, केटोले २००६ को जापानको लागि सबैभन्दा खुशीको क्षणमा रुपमा जापानी अधिराजकुमार दम्पत्तिलाई भएको पुत्रलाभलाई उल्लेख गरेको थियो। गत सालको सेप्टेम्बरमा आकिशिनो-किको दम्पत्तिका तेश्रो सन्तानको रुपमा हिसाहितोको जन्म भएको थियो, जापानी राजदरबारमा ४० वर्षयताको पहिलो पुरुष सन्तानको रुपमा।
राजकुमार हिसाहितोको जन्मभन्दा पहिले जापानका परम्परावादीहरु र विशेष गरी दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरु अत्यन्त चिन्तित थिए, किनभने जापानी राजगद्दी आरोहणको लहरमा वर्तमान सम्राट आकिहितो र राजकुमार नारुहितोपछि नारुहितोकी सुपुत्री आईको थिईन्। जापानको इतिहासमा पहिलोपल्ट नारीले सत्तारोहण गर्ने सम्भावना देखिएको थियो र त्यसैअनुसारक नियम-कानून र बिधेयकहरु बनाउने माग उठ्न थालेको थियो। कथित परम्परा नाशिने डरले दक्षिणपन्थीहरुको टाउको दुखेको थियो र उनीहरु कुनैपनि हालतमा यसलाई रोक्न चाहन्थे। हिसाहितोको जन्मसंगै यी सम्भावनाहरु टरेर गए।
राजकुमारी मासाको (नोरुहितोकी श्रीमती)लाई पुरुष सन्तान पैदा गर्न ठूलो दबाब थियो राजदरबार र परम्परावादीहरुको। मासाको झण्डै तीन वर्षजति सार्वजनिक समारोहहरुमा देखै परेकी थीईनन्। के सम्म बाहिर आएको थियो भने मासाकोकै कारणलाई लिएर नोरुहितोको आफ्ना बाबुआमासंगको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको थियो। मासाको फेरि बच्चा जन्माउन शारिरीक रुपले असक्षम भएको हल्ला पनि चलेका थिए, तर यथार्थ हो, होईन, यो लेखकलाई जानकारी भएन।
राजगद्दी चढ्ने कुरामा मात्र हैन, जापानको दैनिक जीवनमै महिला-पुरुष असमानता अत्यन्त बढी छ। झ्वाट्ट हेर्दा पत्ता लाग्दैन यो कुरा, तर केहि समय जापानमा बिताएपछि थाहा हुन्छ। संगै काम गर्ने कार्यालयमा चिया बनाउने काम महिलाकै हुन्छ। पाहुना आएभने पनि चिया बनाएर दिने काम पनि महिलाको हुन्छ। त्यसो त जापानमा माथिल्लो तहमा महिलाहरु असाध्यै कम छन्, नेपालकै हाराहरीमा आईपुग्ने गरी! (यसबारे तथ्यांकसहित साझाकै कुनै एउटा धागोमा राखिसक्नुभएको छ साथीहरुले।) घरमा त जापानी पुरुषहरु स्वास्नी हैन दासनै चाहन्छन्। यति विकसित र उच्च शिक्षित दर भएको देशमा यस्तो स्थिति एकदम अस्वाभाविक लाग्दो रहेछ।
जापानी महिलाहरुले विद्रोह नगरेका हैनन् तर यो विद्रोह नारा, जूलूश आदिको रुपमा नदेखिएर बिल्कुलै फरक ढंगले प्रस्तुत भएको छ। उनीहरुले विवाह गर्नै छाडेका छन्! फलस्वरुप, जापानमा जन्मदर एकदम कम भएर गएको छ (औसतमा एक दम्पत्ति बराबर १.३ भन्दा कम बच्चाहरु!) शहरमा बच्चाहरु कम देखिन्छन् र बूढाहरुको हूल बढ्न थालेको छ। केहि जापानी पुरुषहरु स्वास्नी खोज्न चीन, फिलिपिन्स आदितिर धाउन थालेका छन्। तर कतिले धाउने?!
एकातिर स्थिति यस्तो छ, अर्कोतिर जापानी राजनीतिज्ञहरुलाई भने खासै मतलब छैन। उनीहरु महिलाको स्थिति पुरुषसरह सम्मानजनक बनाउने, बच्चा जन्माउँदा र हुर्काउँदाको समयले महिलाहरुको पेशागत जीवन (क्यारियर)लाई दिने धक्कालाई सकेसम्म कम गर्ने, वच्चाहरुको हेरचाहका लागि राज्यले अझ बढी लगानी गर्ने आदि काम गरेर महिलालाई पारिवारिक जीवनतिर आकर्षण गर्नुको साटो ‘सन्तान नपाउने आईमाईलाई पेन्सन दिनुहुन्न!’ भनेर डाएटमा भाषण ठोक्छन्। केहि समय पहिला एकजना मन्त्रीले त ‘आईमाई भनेका बच्चा पाउने मेशीन हुन्, त्यसैले हरेक मेशीनले सकेसम्म बढी उत्पादन दिनुपर्छ---!’ भनेर भाषण हानेका थिए। त्यसले जापानमा निकै ठूलो खैलाबैला ल्याएको थियो तर जापानी प्रवृत्तिमा भने कुनै ठूलो अन्तर ल्याउन सकेन त्यो खैलाबैलाले पनि।
मलाई थाहा छ, यो जापानी यथार्थको प्रतिबिम्बमात्र देखिएको हो त्यो केटाको बोलीमा। ती कुरामा केटो आफैंले कति विश्वाश गर्छ, मैले थाहा पाउने कुरो भएन तर म ठोकेर के भन्न सक्छु भने केटो आफैंले त्यो लेखेको होइन, किनभने जापान अघोषित ‘सामाजिक-सांस्कृतिक साम्यवाद’ भएको देश हो। विश्वविद्यालय प्रशाशनले लेखेर उसलाई पढन लगाएको हो। त्यो केटाले जुन ‘खुशी’ ब्यक्त ग-यो, त्यो ‘खुशी’ जापानी राज्यको संस्थापन पक्षको ‘खुशी’ हो र याकुजा(आपराधिक गिरोह)हरुसंग टाउको जोडिएका राजनीतिज्ञहरुको 'खुशी' हो।
यी कुराहरु मैले पहिलेनै थाहा नपाएको होईन, तर त्यो दिन सुनेपछि भने मेरो दिमागमा एकदम गाढा भएर टाँसिएका छन् र मेरो चार वर्षे जापान जीवनका सम्पूर्ण सकारात्मक अनुभवहरु पहिरोमा पुरिएका छन्।
[ posted by Gautam B. @ 02:50 AM ] | Viewed: 2327 times [ Feedback] (2 Comments)
तीन पुराना कथाहरु [Gautam B.'s Blog]
Monday, December 25, 2006 | [fix unicode]
यी कथाहरु साझामा पहिल्यै टाँसिसकिएका हुन्। पछि खोज्न सजिलो होस् भनेर सोहोरेर यता एकै ठाउँमा ल्याएर थुपार्दै छु।
“नमस्कार हाकीम सा’प!” कमीज-सुरुवाल-इष्टकोटको परिधानमा आएका एकजना बूढा बा भित्र पसे।
“दिन्छ दिन्छ, किन दिन्न? त्यो लेखेलाई म भन्दिउँला। यताउता सोध्यो भने विक्रम क्याप्टेन सा’पले भन्या भन्नु।“ बूढालाई यति भनेर हाकिम सिपाहीहरुलाई आदेश दिन थाल्यो। “----- ल बाँस उठाएर ले’ र हिँडो। ------"
“काखमा राखेर हल्लाए निदाऊँछे कि---।” म काखमा लिन्छु, तर छोरी मेरो काखमा आएपछि झन झर्किन्छे। र यतिखेरसम्म ऊ पूरै ब्यूंझिसकेकी छे। म छोरीलाई उनको काखमा राख्दिन्छु, तर छोरीले काखमा बस्न अझै मन नगरेपछि उनी उसलाई कार्पेटमा छोडिदिन्छिन्।
"चन्द्र कुमारजी, भोलि योकोहामामा हुने 'निप्पोन बायोटेक'को त्रैमासिक बैठकमा भाग लिन तपाईँ जानुहोला। म जान नभ्याउने भएँ।गत महिनाको सम्मेलनमा पेश गरिएका सामाग्रीहरु पनि लैजानुहोला र त्यसबारेमा छोटो प्रस्तुति दिनुहोला। धन्यवाद।“ चन्द्र कुमारले पी.एच.डी. शुरु गरे यता एक दुई पटक बूढाले यस्ता बैठकमा आफ्नो साटो चन्द्र कुमारलाई
‘स्सा—ला! थोत्रो भाँडोमा धो’को लुगा यत्रो गतिलो हुन्थ्यो---!’ धेरै पुरानो वाशिङ मेशीन थियो उस्को, कुनै नेपालीले नेपाल फर्किने बेलामा छोडेको। पछिल्लो पटक धोएर निकालेकै बेलामा पाइण्ट एकदम खुम्चिएको याद गरेको थियो उसले। पछि हेरौँला र कुनै ड्राइक्लीनरकहाँ लगेर ठीक पारौँला भनेर छोडेको थियो, तर त्यसपछि एकपटक पनि हेरेनछ उसले। अर्को एक जोर कालो सूट हाल्ने विचार पनि पुरानै हो चन्द्र कुमारको, तर कहिले के कहिले के भएर किन्ने मेसै परेको छैन। पाइण्टले भोलि घोर बेइज्जत गर्नी भो भन्ने भावले मन खल्ल भयो चन्द्र कुमारको। ‘भोलि बिहान एकछिन फेरि मच्चिनुपर्ला आइरन ले’र।‘ भन्ने सोच्दै उ सुत्यो।
भोलिपल्ट बिहानको नित्यकर्म सकेर आइरन लिएर मच्चिन थाल्यो। अहिले भने एकपटकमै छोडिदियो किनभने जति मच्चिएपनि पाइण्टले ठीक ठाऊँमा आउने सूर ल्याएन।
तै इसुका स्टेशनबाट रेलमा बसेपछि उस्को समस्या हल भयो एक छिनको लागि। रेलभित्रको भिडमा चन्द्र कुमारको खुम्चेको पाइण्टको त के, चन्द्र कुमार आफैं हरायो।
वानागो पुगेर हतार हतार शिन-कान-शेनको प्लेटफार्मतिर दौडियो, तर पनि दश मिनेट जति कुर्नुपर्ने भयो त्यहाँ। सधैंजस्तो स्टेशनमा आफ्ना एक्सरे आँखा दौडाएन आज चन्द्र कुमारले, प्रतीक्षा कक्षको एउटा कुनामा गएर बस्यो।
हरेक पटक यो बाटोबाट यात्रा गर्दा फुजी पर्वत हेर्न खोज्छ उ, तर अहिलेसम्म राम्रोसंग देखेको छैन। कहिले कुहिरो डम्म हुन्छ, कहिले कसैसंग गफ गर्दा गर्दै यादै हुँदैन। आज दिन पनि राम्रो थियो र उ एक्लै पनि थियो; तर आज पनि छुट्यो।
कार्यक्रम स्थलबाट चन्द्रकुमार सोझै सब-वे स्टेशनतिर लाग्यो। उस्लाई कतिखेर कोठामा पगौं र त्यो पाइण्ट फुकालेर हुर्रयाऊँ जस्तो भैरहेको थियो।
अहिले भने फुजी पर्वत हेर्न बिर्सेन उस्ले। हुनत साँझ परिसकेको थियो, तर फुजी पर्वतको आकृति भने एकदम स्पष्ट देखिएको थियो। छाती तन्काएर उभिएको महिमामण्डित फुजीलाई हल्का अँध्यारैमा सहि सर्वाङ्ग देखेपछि चन्द्र कुमार त्यसै त्यसै आल्हादित भयो र आधा क्यान बियर स्वाट्टै पा-यो। कुन्नि कुन खुशीले हो, चन्द्र कुमारको अनुहार उज्यालिँदै आएको थियो। खुम्चेको पाइण्ट अथवा बिहानकी त्यो केटी, दुबै उस्को मनबाट हटिसकेका थिए।
“भोलि दिऊँसो एमी केनमा कार्यक्रम र’छ नेपाली समाजको, पातलीको डान्स पनि छ रे। तँ अहिले यतै आ। भोलि संगै जाऊँला।“
इसुका, वानागो, एमी:- काल्पनिक ठाऊँहरु
[ posted by Gautam B. @ 08:03 AM ] | Viewed: 2259 times [ Feedback] (5 Comments)
कथा- "कुँडो" [Gautam B.'s Blog]
Friday, December 08, 2006 | [fix unicode]
‘कुँडो अलि धेरैनै पकाउँछु आज।‘ उ टहल्दै, गम्दै थियो। ‘गोलभेंडा त छ, पालुंगो छैन कि, पालुंगो रैनछ भने मसिनो च्याउ छ, आज कुँडोमा च्याउ पनि हाल्दिन्छु। जाँदाखेरि दुई-तीन क्यान बियर पनि लानुपर्छ कि क्या हो! फिट्टू भ’र भोलि बिहान दश बजेसम्म सुत्छु अनि।------ तर बियर लिन त दश मिनेट नहिँडी हुन्न नजिकको कन्बिनिसम्म पुग्न, के गर्नी होला---? ----‘
बल्ल-बल्ल नौ बज्यो। यताउता गरेर पुस्तकालयबाट उ निस्कँदा सवा नौ भईसकेको थियो। कन्बिनी पुगेर बियरको एउटा सानो केसनै किन्यो उसले, पछिलाई पनि हुन्छ भनेर। कोठामा आईपुग्दा दश बजिसकेको थियो।
“थुक्क----! धत्तेरिका स्-----स्साला!” भान्छाको बत्ती बल्नु र उ कराउनु एकैचोटि जस्तो भयो। वाश-वेसीनमा टन्न जूठा भाँडाहरु थिए। बल्ल याद आयो उस्लाई, यी भाँडाहरु सोमबार रातिदेखिकै हुन्। मंगलवार एउटा काम परेर वानागो गएको थियो र फर्किँदा रेलमै बेन्तो किनेर खाएको थियो। अस्ति राती कप-रामेन खाएको थियो र ल्याबमै सुतेको थियो। हिजो चन्द्रेको कोठामा सुतेर आज त्यतैबाट कलेज गएको थियो।
कन्बिनि: convenience store को प्रचलित जापानी लोकबोली
वानागो: काल्पनिक शहर
कप-रामेन: डिष्पोजेवल कपमा हुने तयारी चाउचाउ (त्यहि कपमा तातो पानी हालेर चाउचाउ खाए हुने, बनाउने छुट्टै भाँडो नचाहिने)
[ posted by Gautam B. @ 08:29 PM ] | Viewed: 2425 times [ Feedback] (19 Comments)
शहरकी बत्ती [Gautam B.'s Blog]
Saturday, November 25, 2006 | [fix unicode]
हुनत कविताको देशमा टाँसिसकेको कविता हो, तैपनि आफैंलाई मन परेको कविता भएकोले यता पनि टाँस्दै छु।
[ posted by Gautam B. @ 09:39 AM ] | Viewed: 2718 times [ Feedback] (3 Comments)